पानीजहाजबाट अचा’नक क्याप्टेन हामफाले, कारण थाहा पाएपछि यात्रुले गरे क्याप्टेनको सम्मान – Dainik Sangalo
धनकुटामा २८ हजार नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ
यी हुन् हिजो ७७ जनाको ज्यान बचाउने बुद्ध एयरको क्याप्टेन आङगेलु शेर्पाकी श्रीमती पाइलट
उड्नुअघि जहाजको इन्जिन जाँच्ने इञ्जिनियर दाजु–बहिनीकाे प्रेरणादायी कथा
विश्वमा यति धेरै प्लेन दु र्घट ना हुँदा पनि किन राखिँदैन प्यारासुट ? यस्तो छ कारण
नेपालमा एकैदिन ११ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित कति ?
भक्तपुरमा टेलरको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृ,त्यु
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: ११:३१:१३
चाहे जलयात्रा होस् वा हवा’ई यात्रा । चाहे सड’क यात्रा नै किन नहोस् ।हरेक सवारी साधन:मा चालक आवश्य’क हुन्छ । चालकबि’ना सवारी साधन चल्दैन । तर यदि कोहि चाल’क यात्रु भरीएको सवारी’बाट हा’म फा_ले भने के होला ?
म्यानमारमा एउटा पानीजहाजका क्याप्टेन पानी’मा हाम फाले’को घट’ना अहिले सर्वत्र चर्चा’मा छ । म्यानमा’रको डाला पोर्टमा खचाखच यात्रुले भरिएको पानिजहाजबाट सोहि जहाज’का क्याप्टेन अचान’क पानिमा हा’म फाले ।
६० वर्षीय क्याप्टेन यु मेइन्ट एइले जहाजबाट ४० फिट तल नदीमा हाम फालेका हुन् । तर उनी यसरी पानि’मा हाम फाल्नुको कार’ण भने निकै रोचक एवम् मार्मिक छ । खासमा उनी पानीज’हाज लिएर डाला पोर्टबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा थिए ।
यतिकैमा एक महिला अ’चानक जहा’जबाट पानी’मा खसिन् । महिला खसेकै ठाउँ तर्फ अर्को जहाज आउँदै थियो । यदि तत्काल उनलाई उद्धा’र नगरिएको भए ति महिलाको ज्या’न जान सक्थ्यो ।
त्यसैले डुब्न लागेकी महि’लालाई बचाउन’का क्याप्टेन यु पानीजहा’जबाट हाम फाले ।क्याप्टेन यु विगत ४० वर्षदेखि जहा’जमा काम गर्दै आएका छन् । यस क्रममा उनले सयौंलाई बचाइसकेका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अब म मरे भने पनि फरक पर्दैन, म बुढो भए । तर अकाल’मा कोहि युवा न’मरुन् । त्यही सोचेर म जहा’जबाट हाम फाले’को थिएँ ।’उद्धारप’छि ती महिलाला’ई स्थानीय अस्पता’ल लगिएको थियो । उनको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
Last Updated on: August 28th, 2021 at 11:31 am
२७७३३ पटक हेरिएको
४.	म्युजिक भिडियो पाउँन छाडेपछि प्रहरीमा भर्ति भए दुर्गेश थापा
६.	यिनै हुन् संखुवासभाको घ’टना अनु’स’न्धान गर्ने पाँच प्र’हरी : भए पुरस्कृत , प’क्राउ परे अर्का ब्यक्ति पनि
७.	भर्खरै हेर्नुस् , पबित्राको मोबाईल चेक गर्दा खुल्यो सोच्नै नसकिने यस्तो भित्री रहस्य, त्योदिन प्रेमीलाई फोनमा यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन् (हेर्नुस् भिडियो)
८.	पूजासँग ब्रेकअप भएसँगै गरिमाको प्रेममा परेका आकाशले गरे इन्गेजमेन्ट
९.	नेपालमा भयो अनौठो घ’टना २८ बर्षिय युव’तीले जन्माइन ५ सन्तान बाउ परे चकित (भिडियो सहित)
विदेशमै गर्भ’वती बनाई नेपाल आएर श्रीमति स्वीकारे फेरि छोडेर कपुर बम फरार ।। श्रीमती को झापा मा बि’चल्ली रुदै रुदै (भिडियो सहित )
सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट रेबिज उन्मूलन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौंको पेप्सीकोलाबाट ४८ वर्षीया महिला पक्राउ ! ३० हजार भारुमा ईज्जत फालिछन